Shirkadda Turkish Airlines Oo Ogolaatay In Ay Si Bilaash Ah Cunno Ugu Rarto Soomaaliya
Shirkadda Turkish Airlines ayaa ogolaatay in ay Soomaaliya si bilaash ah ugu rarto in ka badan 60 tan oo cunno ah kadib markii ay tixgalin siisay olole lagu baahiyay baraha bulshada oo lagu dalbanayay in Turkish Airlines ay si bilaasha ah ku gaarsiiso raashiin dalka Soomaaliya oo abaaro baahsan ay ka jiraan.
Jerome Jarre oo ah wiil dhallinyaro ah oo u dhashay dalka Faransiis-ka ayaa ololahan ka bilaabay baraha bulshada. Jerome Jarre waxa uu u kuurgalay abaaraha ka jira Soomaaliya kadibna waxa uu ogaaday in Turkish Airlines ay tahay shirkadda kaliya ee isku xerta Yurub iyo Soomaaliya. Waxa uuna sameeyay hashtagga #TurkishAirlinesHelpSomalia oo Shirkadda Turkish Airlines looga dalbanayo in ay caawiso Soomaaliya. Hashtaggaas ayaa ku faafay baraha bulshada waxaana adeegsanaya maalaayiin qof.
Saacado kooban kadib, Shirkadda Turkish Airlines ayaa barteeda Twitterka ah kusoo qortay in ay caawineyso Soomaaliya ayna diyaar u tahay in ay gaarsiiso cunada.
Jerome Jarre iyo koox dhallinyaro ah ayaa bilaabay olole kale oo lacag iyo cunno loogu aruurinayo Soomaaliya kadib markii Turkish Airlines ay ogolaatay codsigii loosoo gudbiyay. Waxaa ay sanduuq lacag aruurin ah ka fureen gofundme.com oo ah website loogu tirogalay in dadka caawinaadda u baahan lacag looga uruuriyo.
16 saacadood ka hor ayey bilaabeen ololahan lacagta lagu aruurinayo iyaga oo doonayo in ay aruuriyaan lacag gaareysa $1 milyan oo doollar. Ololahan oo ah mid aad u xooggan ayaa la filayaa in muddo ka yar 24 saacadood lagu aruuriyo halkaas milyan ee doollar. Waxaana hadda lacag aruurinta ay mareysaa $814,134. Dadka lacagtaas ku deeqay waxaa lagu qiyaasi karaa 27,939 qof oo ku kala nool daafaha dunida.
Shirkadda Turkish Airlines ayaa ballan qaaday in ay si bilaash ah raashiinka iyo deeqaha ku gaarsiineyso Soomaaliya illaa ay abaarta iyo cunno yarada ka dhamaato.
Jerome Jarre iyo kooxdiisa ayaa sheegay in marka hore ay magaalada Istanbul ka iibin doonaan cunnada loo qaadi doono Soomaaliya si ay ugu mahadceliyaan gacanta ay ka heleen dadka Turkida ah, waxaa kale oo ay ballan qaadeen in cunada kale ay ka iibin doonaan gudaha dalka Soomaaliya si kobaca dhaqaalaha dalka ay uga qeyb-qaataan.